Sergej Milinkovic-Savic oo markale xiiso ka helaya kooxaha ugu waaweyn Premier League iyo naadiga dooneysa saxiixiisa oo la xiriirtay Lazio – Gool FM
(England) 08 Luulyo 2021. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara naadiga Lazio ee Sergej Milinkovic-Savic ayaa dib u helaya xiisaha qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub iyadoo la xasuusto in saddex xagaa kahor uu ahaa bartilmaameedka kooxo waaweyn.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa haatan lagu soo warramayaa inay dib usoo noolleysiisay xiisihii ay u qabtay laacibka reer Serbia iyadoo wararku ay intaas ku darayaan inay si toos ah ula xiriirtay naadiga uu laacibkan u ciyaaro ee Lazio sida laga soo xigtay Calciomercato.
Xiddigan khadka dhexe kubadda ka maamula ayaa horraan diiradda u saarnaa kooxo ay ka mid tahay Manchester United, balse ma jirin koox aqbashay qiimaha ay naadigisii ku dooneysay inay ku iibiso.
Haatan, waxaa wararka ka imaanaya dalka Taliyaaniga ay sheegayaan inay Lazio iibka Milinkovic-Savic du dhigtay 60 milyan oo gini, balse Reds ayaa dadaal ugu jirta inay saxiixa 26-sano jirkan ku dhammeyso qiimo intaas ka hooseeya si ay u sameyso saxiixyo kale xagaagan.
Arsenal oo dhaq-dhaqaaq wanaagsan ka sameyneysa suuqa kala iibsiga iyadoo dalab ka gudbisay Aouar, kuna soo biirtay doonista xiddig Barcelona u ciyaara
Waa kuma weeraryahanka ka tirsan Barcelona ee Lionel Messi kula jira diiwaanka xiddigaha ugu taajirsan isboortiga...(Ganacsiyada uu leeyahay iyo sirta taajirnimadiisa)